ရှင်ယောဟန် သြဝါဒစာ တတိယစောင်။ – Third Letter from John the Apostle – JESUS UNLTD
ရှင်ယောဟန် သြဝါဒစာ တတိယစောင်။ – Third Letter from John the Apostle
၁ ချစ်ရတဲ့ ဂါယုရေ၊ မင်းကို ငါ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ မင်းကို စာရေးနေတဲ့ ငါ ယောဟန်ဟာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ပြီးတော့ လေးစားမှုခံရတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ အမှန်တရားကို ငါသိလို့ ငါက မင်းကို မေတ္တာစစ်နဲ့ ချစ်တာဖြစ်ပါတယ်။
၂ ချစ်ရတဲ့ ညီလေးရေ၊ မင်းရဲ့အတွင်းလူဟာ ဝိညာဉ်ရေးမှာ ကြီးထွားလာပါတယ်။ ပြီးတော့ မင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကြီးထွားလာမှုနဲ့အတူ မင်း လုပ်ဆောင်သမျှ အောင်မြင်ဖို့ ငါ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ မင်း ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိနေဖို့လည်း ငါ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
၃ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်တဲ့ ငါတို့ရဲ့ညီအစ်ကိုတွေ ငါ့ဆီ ရောက်လာကြတဲ့အချိန်မှာ ငါ သိပ်ဝမ်းသာခဲ့ပါတယ်။ မင်းက ဘုရားသခင်ကို စိတ်ရင်းနဲ့ ယုံကြည်တဲ့အကြောင်း၊ ပြီးတော့ မင်းက ဘုရားရဲ့ အမှန်တရားသွန်သင်ချက်နဲ့အညီ ပြုမူကျင့်ကြံတဲ့အကြောင်းတွေကို သူတို့တွေ အခိုင်အမာ ပြောကြပါတယ်။
၄ ငါ့ရဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးတွေက အမှန်တရားသွန်သင်တဲ့အတိုင်း အသက်ရှင်နေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာ ကြားရတဲ့အခါ ငါ သိပ်ဝမ်းသာတယ်။
၅ ချစ်ရတဲ့ ဂါယုရေ၊ မင်းက စစ်မှန်တဲ့ ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ပီပီ ညီအစ်ကိုတွေကို စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ သူစိမ်းတွေကိုလည်း မစကူညီတယ်။
၆ မင်းက လူတိုင်းကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကို ယေရှုယုံကြည်သူတွေရှေ့မှာ ငါတို့ညီအစ်ကိုတွေက အခိုင်အမာပြောခဲ့ကြပါတယ်။
အခု သူတို့က မင်းဆီကို လာပြီးရင်တော့ သူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်ကို ဆက်သွားကြလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် မင်းက သူတို့လိုအပ်တာမှန်သမျှကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ မှန်ကန်တာကို မင်းလုပ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ မင်းက ဘုရားသခင်ကို ဝမ်းမြောက်ကျေနပ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၇ ညီအစ်ကိုတွေက ယေရှုအကြောင်းကို ဟောပြောဖို့ သူတို့ရဲ့ခရီးကို ဆက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့ တခြားလူမျိုးတွေဆီက ဘာအလှူငွေကိုမှ သူတို့တွေ မကောက်ခံခဲ့ကြပါဘူး။
၈ ဒီလို လူတွေကို ငါတို့တွေ ကူညီကြရမယ်။ ဒီလိုနဲ့ ငါတို့တွေဟာ အတူတကွ အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ ဘုရားသခင်အကြောင်းအမှန်တရားကို ဖြန့်ဝေကြမယ်။
၉ ငါတို့ညီအစ်ကိုတွေ အကူအညီလိုနေတယ်ဆိုတဲ့ စာတစ်စောင်ကို ယုံကြည်သူတွေဆီ ငါရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲသြဇာအာဏာကို ပြချင်နေတဲ့ ဒယောတရပ်က ငါတို့နဲ့ ဘာမှ မလုပ်ချင်ဘူး။
၁၀ ငါ လာနိုင်ရင်တော့ သူ့ရဲ့အပြုအမူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငါ မေးမြန်းရဦးမယ်။ ဒယောတရပ်က ငါတို့အကြောင်း အမုန်းစကားတွေ ပြောပြီးတော့ လိမ်ညာ သတင်းဖြန့်တယ်။ ပြီးတော့ သူက ဒီမှာတင်မရပ်ဘဲနဲ့ အကူအညီလိုနေတဲ့ ခရီးသွားညီအစ်ကိုတွေကိုလည်း အသင်းတော်ကို လာခွင့်မပြုဘူး။ ပြီးတော့ သူတို့ကို ကူညီချင်တဲ့ တခြားယုံကြည်သူတွေကိုလည်း မကူညီဖြစ်အောင် ဒယောတရပ်က တားမြစ်ပိတ်ပင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကို မနာခံတဲ့သူတွေကို အသင်းတော်ထဲကနေ နှင်ထုတ်ပါတယ်။
၁၁ ချစ်ရတဲ့ညီလေးရေ၊ ဆိုးယုတ်တာကို လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ပုံစံနောက်ကို မလိုက်မိပါစေနဲ့။ ကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ပုံစံနောက်ကို လိုက်ပါ။ ကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့သူက ဘုရားသခင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဆိုးယုတ်တာကိုလုပ်တဲ့သူဟာ ဘုရားသခင်က ဘယ်သူလဲဆိုတာ နားမလည်ဘူး။
၁၂ ဒေမေတရိ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငါ နည်းနည်းပြောပါရစေ။ သူက နာမည်ကောင်းရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ လူတိုင်းက အခိုင်အမာပြောကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်ရဲ့အမှန်တရားက ငါတို့ကို သွန်သင်တဲ့အတိုင်း သူလုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာ ငါတို့လည်း ခိုင်ခိုင်မာမာပြောနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ငါတို့က အမှန်တရားကို ပြောနေတယ်ဆိုတာ မင်း သိပါတယ်။
၁၃ ငါ မင်းနဲ့ တခြားကိစ္စတွေအများကြီး ဆွေးနွေးဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအကြောင်းကို စာရွက်ပေါ်မှာ မှင်နဲ့ မရေးချင်ဘူး။
၁၄ ငါ မင်းနဲ့ မကြာခင် တွေ့ပြီးတော့ ဒီအကြောင်းကို အချင်းချင်းပြောကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
၁၅ ဘုရားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်း မင်းနဲ့အတူရှိဖို့ ငါ ဆန္ဒပြုပါတယ်။ မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတွေက မင်းကို နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပါးကြပါတယ်။ ပြီးတော့ မင်းလည်း ငါတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကို ငါ့ကိုယ်စား နှုတ်ဆက်ပေးပါ။ အာမင် - ပြည်စုံပါစေ။ 1 My dear Gaius, I am greeting you. I am John, an old and respected man, who is writing to you. I love you because I know the truth about who God is.